Hodinihina amin’ny fotoana manaraka: miahiahy ny amin’ilay lalàna momba ny mpanohitra ny loholona | NewsMada
Hodinihina amin’ny fotoana manaraka: miahiahy ny amin’ilay lalàna momba ny mpanohitra ny loholona
Nangataka fanalavam-potoana. Tsy mbola nolanin’ireo loholona ilay lalàna mifehy ny mpanohitra na ny « Lalàna Brunel », nandalo tetsy amin’ny lapan’Anosikely, omaly. « Misaotra amin’ny fahasahin’ny depiote nandany izany, saingy mipetraka ny ahiahy. Samy mpitondra isika. Samy mpanao politika isika… Nahoana no nokitihina ilay lalàna? Tsy azo anomezan-tsiny izany. Efa dingana lehibe vita ny fanazavana natao teto, nahafahana nihaino. Voaray ny hetaheta hanomezana antsika handinika sy hanontany fanazavana bebe kokoa. Ny fanakianana sy ny fanatsarana hanampiana ny namana eny Tsimbazaza”, hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, teo am-pamaranana ny fivoriana. Nambarany fa tokony hiezaka hamakafaka sy hitondra izany amin’ny adihevitra demokratika ka ilaina ny hananana fotoana maharitra handinihana izany. “Ny hisavasavana ny ravina, ahitana ny fotony mba hahatomombana ny ampitso. Ny andraso lava koa anefa, mahavery ny andro. Maika ary tsy miandry ny fiainam-pirenena nefa tokony hifanajana ny fotoana ka misy fotoana tsy maintsy ilaina raha te hanana ny tsara.Mahareta fa hanana soa satria fototra ioren’ny demokrasia hahamarin-toerana ny mpanohitra izany”, hoy ihany izy.
Fitiavan-tanindrazana fa tsy adilahy politika
Nanteriny fa tsy tokony horaisina ho adilahy politika izao fanemorana izany. “Fitiavan-tanindrazana sy te hanana ny tsara. Tsy hanao barofo na handrava firenena hitondra any amin’ny krizy fa ho amin’ny fanatsarana… Ilaina ny mpanohitra satria misy ny fifandiambiasam-pitondrana araka ny soatoavina demokratika”, hoy Rakotovao Rivo.
Araka izany, hitohy amin’ny fivoriana amin’ny fotoana manaraka indray izany ny fandihinan’ny loholona io “lalàna Brunel” io. Nifarana, omaly, rahateo ny fivoriana tsy ara-potoana eo amin’ireo parlemanta roa tonta, rehefa naharitra 12 andro.